Umkhiqizi Omkhulu Wethebula neFektri | AmaMede
Kwa-MEDO, amatafula ahlala eyinkanyezi ekhanyayo. Ungumngane omuhle kakhulu wosofa be-MEDO. Bonke abathengi bafuna eyodwa njengoba ilusizo futhi ingabizi. Amatafula angeza isikhala esingeziwe se-. Iphinde ilethe umuzwa wesitayela kusofa wakho. Kungaba futhi yizinto zokuphromotha ezinhle noma isipho ngenkathi yokuthengisa.
Itafula umbono wokuqala wefenisha endlini. amatafula angangezwa kunoma yisiphi isikhala ekhaya futhi aguquguquke ngokungapheli.
Amatafula futhi ahlanganisa ukwakheka okuhle nokusetshenziswa. Ngokusebenzisa imishini esezingeni eliphakeme nezinto zekhwalithi, ungaqiniseka ngekhwalithi yamatafula.
Ithebula Lesimanje Lesibili Lama-Round Corner Marble Top
Yamukela imabula yase-Italiyali njengophahla lwethebulethi nensimbi esongwe ngesikhumba se-premium sehhashi.
Itafula lekhofi leMarble liyathandwa emakethe ngokuthungwa kwalo kwemvelo, ukumelana nokushisa, kanye nokusebenza okungazweli.
Kubuye kube nokuhlukahluka ekwakhiweni kwangaphakathi, ukukhetha okuhle kwezikhala ezahlukahlukene.
Ithebula Lesikhungo Segumbi Lokuhlala Oval Stone Center
Amatafula ekhofi amukela ukwakheka kwemilenze yensimbi eqinile, engakwazi ukuthwala amandla adonsela phansi amaningi ngaphandle komkhathi.
Isihloko samatshe sokunethezeka siyinto enhle kakhulu enobulukhuni obukhulu. Unqenqema lwaphezulu luyinsimbi ebunjiwe evala futhi ivikele itshe.
Ithebula Lesikhungo Sesikhumba Sokunethezeka Sesimanje sase-Italy
Okuphansiwe kabusha, okutholakala kokulandelayo kuqeda imabula, ngesiphetho se-carbon leg open-pore lacquer. Kule nguqulo enesikhumba sehhashi, lonke isakhiwo saphezulu sisehholweni ngakho-ke alukho uhlaka. Ngakho-ke kubukeka imodeli yokunethezeka yetafula eliphakathi nendawo
Ithebula Lesikhungo Esincane Esinesikhumba Sezihlalo
I-Underpanel ku-MDF yezinyosi enentuthu yomuthi womlotha futhi iboshwe ngesikhumba sehhashi esingenisiwe.
Imilenze Ensimbi, isiphetho segolide-nickel, nama-glides okuvikela.
Ithebula lokudlela le-Marble Dining Minimalist
Uhlaka lwethebula lwenziwe ngensimbi futhi lusongwe ngesikhumba se-preminium sehhashi kuhlanganiswe nomlenze wensimbi ongenansimbi ophucuziwe. Kunezinto ezahlukahlukene zedeskithophu: imabula ebhemayo, ukwelashwa kombala okugqamile okungangeni manzi. Ukuthungwa ngokucophelela nokuklama okusebenzayo kudala isitayela esihle.
Ithebula lokudlela elingunxande elincane
Ngomabula osezingeni eliphakeme noma ngokhuni oluqinile oluhlotshiswe ngaphezulu kwetafula eligobile elingunxande, itafula lokudlela kungathiwa yilona ophambili ophambili esikhaleni sasekhaya, esingahlangabezana nezidingo zokufanisa nefenisha ehlukile.
Ithebula Lesimanjemanje Lezokudla Zokunethezeka
Kubonakala ngegolide elimbozwe ngensimbi nomlenze wensimbi omnyama. Itafula lamatshe lasetafuleni liphefumulelwe yisibhakabhaka esigcwele izinkanyezi ebusuku ehlobo: yakhiwa ngokukhethekile okwenziwe ngezinhlobo zemabula esezingeni eliphakeme futhi ezinhlobonhlobo, zakha inhlanganisela eyingqayizivele yemikhiqizo emikhulu nemincane yemabula, engaletha uthingo -like imibala.
Ithebula Lamakamelo Okudlela Elincane
Ngaphezulu kwemabula noma ngokhuni oluqinile kuhlotshiswe itafula eligobile elingunxande, kusetshenziswa izinto zekhwalithi ephezulu zamatshe nezinkuni, itafula lokudlela kungathiwa yilona ophambili esikhaleni sasekhaya, esingahlangabezana nezidingo zokufanisa nefenisha ehlukile.
IMEDO Minimalism isitayela Ifenisha Umenzi Wethebula Lekhofi
Besilokhu sakha amatafula ekhofi asezingeni eliphakeme futhi sithuthukise uhlelo olusebenzayo lwe-QC lokuhlola isici ngasinye sefenisha yethu. Okuhlangenwe nakho kwethu nenqubo yethu kusivumela ukuthi sinikeze amamodeli wekhwalithi esezingeni eliphezulu kanye nezixazululo zethebula lekhofi langokwezifiso ngamanani aphansi.
Unganelisa ukuthanda okuningi kokuklama ngezitayela zethu ezikhula njalo zamatafula ekhofi ashibhile.
Amatafula aseMarble Side afika ngenhla yemabula emhlophe yemvelo. Ihlanganisa isici semabula yemvelo nomlotha waseMelika kahle. Ingenye yamatafula ekhofi aphezulu athengiswa ngemabula. Amaklayenti ethu avame ukuyisebenzisa njengetafula eliseceleni kukasofa eliguquguqukayo kwemiklamo eminingi yosofa ehlukahlukene.
Amatafula amancane ekhofi ayindilinga anomklamo oyingqayizivele. Kugqamile emakethe ngokwakhiwa kwesakhiwo sayo kanye nokuhlanganiswa kwezinto ezahlukene nemibala. kuletha umphumela wokuhlanganisa esikhaleni sakho.
Amatafula asemaceleni, itafula eliseceleni lesikwele elizihlukanisayo ngomphetho nemilenze yalo yegolide. Itafula lisetsheni elixutshiwe elimnyama negolide, kanye nomlenze wensimbi wegolide, lo mklamo wethula isimo sesimanje. Iyahlukahluka ngezitayela eziningi
Amatafula wesimanje ekhofi.
Ithebula eliyinhloko lekhofi lisengxenyeni ye-Veneered MDF ingeza isitayela esithe xaxa. Isisekelo sinezinsimbi eziqinile zekhabhoni ngakho-ke ingaba namandla kakhulu futhi ngasikhathi sinye ibe muhle kakhulu.
Amatafula we-MEDO Minimalism Style Dining
Ingabe udinga amatafula okudlela wangokwezifiso? Masibe ngumthombo wakho wamathebula wangokwezifiso wekhwalithi alingana nephuzu lakho lentengo. Ngokuzibophezela ekwakheni amatafula wokudlela aqinile futhi anemfashini, ithimba lethu lokuklama lihlaziya njalo imiklamo yethu ukuze ivumelane nezimfuno zakamuva zemakethe.
Ulayini wethu wamatafula emabula, amatafula okudlela anwetshiwe, namatafula okudlela ayindilinga kungumkhiqizi wethu wamatafula okudlela.
Amatafula okudlela anezihlalo zabantu abayi-6 kuye kwabayi-8. Kuyithebula lokudlela lakudala elincane elinomphezulu omuhle nesisekelo. Itafula lethebula lingaba yimabula yemvelo noma i-MDF ngokuqedwa kwe-oki veneer Ngenkathi imilenze iyithusi eliphucuziwe elisongwe ngesikhumba sehhashi.
Sinikeza osayizi abathathu ngokufunwa kwezikhala ezahlukahlukene. Izinketho ngokwezifiso ziyatholakala kuma-oda amaningi.
Itafula lokudlela eliyindilinga liza nemilenze yensimbi kanye nongqimba olunamapulangwe amabili. Osayizi, izinto zokwakha kanye nemibala kungenziwa ngokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
Ithebula lokudlela eliphezulu
Idizayini ibushelelezi futhi iyabukeka. Kwaziwa njengomklamo omuhle kakhulu omncane okhombisa indlela entsha yokuphila.
Ucezu olukhulu lwesilayidi esiqinile futhi esincanyana se-ceramic sihleli ezinyaweni ezine zensimbi ezibushelelezi kodwa eziqinile. Ngaphandle kwanoma yimuphi omunye umhlobiso, ugqama ehlathini lamatafula okudlela emakethe. Kuyasiza ngokuphelele ukungena kuzitayela eziningi ezahlukahlukene zangaphakathi.
Ithebula Lesikhungo Sesimanje Sempahla Yasendlini
Ithebula Lesikhungo 1200 * 800 * 325mm 600 * 600 * 445 mm
Izinto Imabula yokwenziwa, Isikhumba Esimpunga Esimpunga Esimnyama
Umlenze Wokudlela Steel Umlenze + Isihlalo sehhashi
I-L016A + B
Ithebula Lesikhungo Ø1200 * 390mm Ø800 * 460mm
Izinto Insimbi engagqwali yegolide, i-pizza grey yemabula yemvelo
Umlenze Wokudlela Umlenze wensimbi
Ithebula Lesikhungo 1000 * 1000 * 350mm 760 * 760 * 450 mm
Izinto Isikhumba se-Premium Saddle, i-Black Steel, i-Oak
Ithebula Lesikhungo 1300 * 780 * 400mm
Izinto Veneer ngibhema, 304 insimbi engagqwali titanium kuhlinzwa
Ithebula Lesimanje Lokudlela Ifenisha
Ithebula lokudlela 30130 * 750 mm Ø150 * 750mm
Izinto Kungeniswe iWalnut / iMabula Yemvelo
Ithebula lokudlela 1630 * 800 * 760 mm
Ithebula lokudlela Ø1200 * 760 mm
Izinto Insimbi, Isikhumba se-Premium Saddle, Kungeniswe iWalnunt Veneer
Ithebula lokudlela 1790 * 1100 * 745mm
Izinto Imabula Emhlophe Phezulu